Macalimiinta dalka oo ay suurtagal tahay inay shaqa joojin ku dhaqaqaan 17-ka bishan – The Voice of Northeastern Kenya
Macalimiinta dalka oo ay suurtagal tahay inay shaqa joojin ku dhaqaqaan 17-ka bishan
Xoghayaha guud ee ururka qaran ee ay ku mideeysanyihiin macalimiinta ee KNUT sido kalena ah xildhibaan baarlamaanka si magacaabid ah ku galay Mr. Wilson Sossion ayaa sheegay in barayaasha dalka ay shaqa joojin sameynayaan laga bilaabo 17-ka bishan hadii aanan intaasi ka hor xal loo helin arrimaha ay tabanayaan.
Guddiga adeegga macalimiinta ee TSC ayuu ka dalbaday inuu meesha ka saaro nidaamyo ay ka mid tahay macalimiinta loo wareejiyo xarumo kale oo ay wax ka dhigayaan.
Mr.Sossion ayaa TSC ku eedeyay inuu dhaqangelinayo barnaamijyada qaar iyadoo wax wadatashi ah aanan lala yeelan ururada macalimiinta dalka.
Waxaa uu wacad ku maray inaysan marnaba ka daali doonin u ololeynta xuquuqda dhanka shaqada ee barayaasha.
Shaqa joojinta ayuu sheegay in laga sameyn doono guud ahaan dalka taasi oo saameyn ku yeelan karto imtixaanada qaran ee sannadlaha ah.
Golaha imtixaanada qaran ee KNEC ayuu ku booriyay inuu isku diyaariyo sidii uu dib ugu dhigi lahaa qabsoomidda imtixaanada fasalka sideedaad ee dugsiyada hoose dhexe ee KCPE-da iyo fasalka afaraad ee dugsiyada sare ee KCSE-da hadii ismariwaaga ka dhexeya KNUT iyo TSC aanan la xalin ka hor 17-ka bishan tobnaad.
Mr .Sossion ayaa xubnaha ururka kale ee macalimiinta ee KUPPET ugu baaqay inay gacan ku siiyaan dadaalka loogu jiro wax ka qabashada caqabadaha jira.
Sido kale xoghayaha guud ee KNUT Mr. Wilson Sossion ayaa doonaya inuu baarlamaanka horgeeyo mooshin ka dhan ah guddiga adeegga macalimiinta ee TSC maadaama uu ku eedeynayo inuu carqaladeeyay hannaanka waxbarasho ee dalka oo uu la yimid xeerar aanan lagu tallaaba qaadi karin.
← DHAGEYSO barnaamijka kulanka star, tahniyadaha iyo salaamaha 07-10-2018
Mudavadi oo doonaayo in dib u habeyn lagu sameeyo gudiga doorashooyinka →